November 20, 2020 - Online Hartha
“မငျးလေးပါးဆုံ ရှတေိဂုံ ကိနျးကမြညျ” ဆိုသော တဘောငျ၏ အဓိပ်ပါယျ ဖှငျ့ဆိုခကျြ…
“မင်းလေးပါးဆုံ ရွှေတိဂုံကိန်းကျမည်” ဆိုသော တဘောင်၏ အဓိပ္ပါယ် စွန်းလွန်းဆရာတော်သည် ရဟန္တာဟု ကျော်ကြားသလို ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု၏ကိုးကွယ်ကြည်ညိုသော ဆရာတော်တစ်ပါးလည်း ဖြစ်လေသည်။ ရဟန္တာဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရှေ့ဖြစ်လာမည့် အရာများကို သိမြင်နိုင်စွမ်း ရှိသလို ပညာဉာဏ် တန်ခိုးများလည်း ပြည်စုံ၏။ ဟုတ်တိုင်း မှန်ရာသာလျှင် မိန့်လေသည်။ ၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၂ အထိ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သော ဦးနုသည် ထိုအချိန်က ကျော်ကြားနေသော( မင်းလေးပါးဆုံ ရွှေတိဂုံကိန်းကျမည့် တဘောင် )အားဆရာတော်ထံ မေးလျှောက်လေသည်။ ဦးနု အမေး။ ။ အရှင်မြတ်ဘုရား ဒီတဘောင်ဟာမြန်မာပြည်မှာ မင်းလေးပါး ပေါ်မှာလား( ဒါမှမဟုတ် )အာဏာလုပွဲ ဖြစ်မှာလား ( ဒါမှမဟုတ် )တခြားတိုင်းပြည်ကမင်းလေးပါး လာဆုံမှာလားဘုရား။ ဆရာတော်အဖြေ။ ။ ဒကာတော်ကြီးဦးနု ထင်သလိုမဟုတ်ပါ။ … Read more
ထူးခွား ငှဝေငျ ဂမ်ဘီရ အစီအရငျ (၂)ပတျအတှငျး အကြိုးထူးသညျ…
ထူးခြားငွေဝင် ဂမ္ဘီရ အစီရင် ၂ပတ်အတွင်း အကျိုးထူးသည်… ထူးခြားငွေဝင်ဂမ္ဘီရအစီရင် ၂ပတ်အတွင်း အကျိုးထူးသည် အရင်နယ်လှည့်ဟောပြောစဉ်က ငွေဝင်ချင်ပါတယ်လို့ အကူအညီတောင်းခံလာတာနဲ့ ငွေဝင်စေတဲ့ယတြာအစီရင်များစွာထဲက အချိန်တိုအတွင်း ငွေဝင်စေတဲ့ အောက်ကဂမ္ဘီရငွေဝင်အစီရင်လေးနဲ့ကူညီစောင်မပေးခဲ့တာပါအခုလိုလူတိုင်းငွေကြေးကြပ်တည်းမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်ဒီအစီရင်လေးကိုအမှတ်ရလို့အဆင်ပြေစေဖို့စေတနာနဲ့ဒါနပြုလိုက်ပါတယ်… ဒီအစီရင်လေးက ထူးထူးခြားခြားကိုငွေဝင်စေတယ်ဗျဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာဝင်မယ်ဆိုတာသာ တစ်ဦးနဲ့တစ် ဦးကံဇာတာအနိမ့်အမြင့်အခြေအနေတွေမတူတဲ့အတွက်မပြောနိင်တာပါ လုပ်ကြည့်ပါ… ထူးခြားမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအပြည့်အဝတာဝန်ယူပါတယ်အစီရင်ပြုလုပ်နည်းလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ ငှက်ပျောရွက်ကို အနေတော်ညှပ်ယူရေဆေးသန့်စင်ပြီးအောက်မှာပုံပါအတိုင်းဆော့ပင်အပြာရောင်ဖြင့်ရေးဆွဲရပါ့မယ်ပြီးလျှင် လေးထောင့်ကွက်အလယ်မှာမတ်စေ့တင်ပြီးထိုမတ်စေ့ပေါ်ဖရောင်းတိုင်၁တိုင်စိုက်ထွန်းလှုပူဇော်ပါ မိမိနေအိမ်ဘုရားမှာပဲထွန်းလှုပူဇော်ရပါ့မယ်နေ့ရက်အချိန်သတ်မှတ်ချက်မရှိလို့အဆင်ပြေသလိုထွန်းလှုပူဇော်နိင်ပါတယ်ထွန်းလှုပူဇော်ပြီး င်တော့ဥုံပထဗျာအာကာသေပဗ္ဗတေစေဝဥဒကေဝနေယံယံပတ္တံပဝါဒေမိသဗ္ဗလာဘသိဒ္ဓိဥပေတုံမေဂါထာကို(၂၇)ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ ငွေဝင်စေဖို့လာဘ်ရွှင်စေဖို့ဆုတောင်းဖို့လည်းမမေ့နဲ့ပေါ့ဗျာဒီအစီရင်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးပါအချိန်တို အတွင်း ထူးထူးခြားခြားငွေဝင်ပါလိမ့်မယ် ဆရာကိုမင်းနိုင်နှင့်တကွ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ များအား အစဉ်ရှိခိုးဦးခိုက်လျက်…. ဆရာဟိန်းB.A(P s y:)(ဗေဒင်နှင့်ဂမ္ဘီရယတြာအစီရင်ပညာ)09-259059505/09-777337919 Unicode Version ထူးခွားငှဝေငျ ဂမ်ဘီရ အစီရငျ ၂ပတျအတှငျး အကြိုးထူးသညျ… ထူးခွားငှဝေငျဂမ်ဘီရအစီရငျ ၂ပတျအတှငျး အကြိုးထူးသညျ အရငျနယျလှညျ့ဟောပွောစဉျက ငှဝေငျခငျြပါတယျလို့ အကူအညီတောငျးခံလာတာနဲ့ ငှဝေငျစတေဲ့ယတွာအစီရငျမြားစှာထဲက အခြိနျတိုအတှငျး ငှဝေငျစတေဲ့ … Read more
ငွေထည့်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ငွေတန်ဖိုးရဲ့အဆ တစ်ထောင်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ သူတောင်းစားရဲ့လုပ်ရပ်…
ငွေထည့်ခဲ့တဲ့ သူတွေကို ငွေတန်ဖိုးရဲ့အဆ တစ်ထောင်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ သူတောင်းစားရဲ့လုပ်ရပ် တစ်နေ့ကဈေးထဲ မှာ သူတောင်းစား တစ်ယောက် တောင်းစားနေတာတွေ့မိတယ်။ သူတောင်းစားနေပုံက ထူးခြားနေတယ်။ “အစ်ကိုကြီး အစ်မကြီးတို့ရယ် သနားကြပါနော်…ပိုက်ဆံလေးများ ထည့်ပြီးရင် လိပ်စာလေးပါ ပေးခဲ့ပါ” သူ့ ရှေ့မှာ ချထားတဲ့ ခွက် ထဲကို ပိုက်ဆံလာထည့်ကြတဲ့ လူတိုင်းရဲ့ လိပ်စာကို မေးပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့မှတ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတော်တော်များများက အိမ်အထိများ လာတောင်းမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲသူ့ခွက်ထဲကို ဘာပိုက်ဆံမှ ထည့်မသွားကြဘူး။ တစ်ချို့ကတော့ သနားတာနဲ့ထည့်သွားကြတာပေါ့ဗျာ။သိပ်မကြာပါဘူး… သူက ခွက်ကို သိမ်းပြီး ခုနက ခွက်ထဲ ပိုက်ဆံထည့်သွားတဲ့ သူတွေရဲ့ အိမ်တွေကိုအပင်ပန်းခံ ပြီး သူတို့ထည့်ခဲ့တဲ့ငွေတန်ဖိုး ရဲ့အ ဆ ၁၀၀၀ ကို လိုက်ပေးတယ်။ အဲ့ဒီ သတင်းက ဈေးထဲမှာ ချက်ချင်းပျံ့သွားတာပေါ့။ … Read more
ထူထဲ ရှညျလြားတဲ့ မကျြတောငျမှေးလှလှ လေးတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျလိုလြှငျ ဒါလေးတှေ လုပျပါ…
မျက်ဝန်းလေးကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မျက်တောင်မွှေးလေး ထူထဲရှည်လျားနေတာမျိုး မဖြစ်ချင်ကြဘူးလားရှင့်။ သူများတွေ မျက်တောင်မွှေးလေး ထူထဲလှပနေတာမြင်တော့ ကိုယ့်ဆီမှာလည်း အဲ့လို ထူထဲရှည်လျားတဲ့ မျက်တောင်မွှေးလေးတွေရှိရင် ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကြတဲ့ ပျိုပျိုမေတို့ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အချိန် ကျရောက်လို့လာပါပြီနော်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်လို့ရမလဲဆိုတာကို ဆက်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ အုန်းဆီ အုန်းဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းနဲ့ ဝါဂွမ်းစလေးတို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ အရင်ဦးဆုံး မျက်တောင်မွှေးကို သန့်စင်အောင် ဆေးကြောထားပါ။ ဝါဂွမ်းစလေးကို အုန်းဆီထဲထည့်နှစ်လိုက်ပြီး အပေါ်မျက်တောင်မွှေးနဲ့ အောက်မျက်တောင်မွှေးလေးတွေကို သုတ်လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ မျက်လုံးထဲ အုန်းဆီမဝင်ဖို့ကိုတော့ သေချာဂရုစိုက်ပေးရပါမယ်။ တစ်ညသိပ်ထားပြီး မနက်ရောက်မှ မျက်နှစ်သစ်လိုက်ပါ။ ဒီနည်းလမ်းကို ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ ကြက်ဥ ကြက်ဥ ၁ လုံးနှင့် ဂလစ်စရင်းအလှဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်းတို့ကို သမအောင် ရောမွှေလိုက်ပါ။ … Read more
နဂိုရုပ်ခံကိုတောင် ပျက်စီးစေတဲ့ ပွေး ၊တင်းတိတ် ၊ နေလောင်နာတွေ အတွက် အကောင်းဆုံး လက်တွေ့နည်း
တင်းတိတ် ပျောက်ချင်လား သံပုရာသီးနဲ့ အုန်းမုတ်ခွက် သွေးလိမ်းပါ လက်တွေ့ပါ အုန်းမုတ် ခွက်သာ သက်သေကြည့်တော့။သံပုရာသီး မသုံးပဲ အုန်းမုတ်ခွက်ပဲသွေးလူးပါက သုံးခါလောက်လူးပြီး မျက်နာပြင်ချောမွေ့လာမည်ကိုလက်တွေ့သိရပါလိမ့်မည် လူသိနည်းသော “အုန်းမှုတ်ခွက်ဆေးနည်းများ” အခုပြောပြမယ့်ခွက်ကလေးက အုန်းမှုတ်ခွက်လေးအကြောင်းပါ ။ ဖတ်ဘူးသမျှနဲ့ကိုယ်တွေ့ဆေးဖက်ဝင် တဲ့အုန်းမှုတ်ခွက်အကြောင်းလေးပါ ။ အညာဒေသရဲ့ရွာတွင်းရွာပြင် ပြယုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချစ့်စရာ့ဓလေ့တွေ ဟာ…ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ ။ ရေချမ်းစင်မှာ သောက်ရေခွက်အဖြစ် အများအားဖြင့် အသုံးပြု ကြတာကတော့ အုန်းမှုတ်ခွက် ပါ ။ အိုးမှုတ်ခွက် ကို အသေချာ အချော ကိုင် ၊ ခွက်နားစွန်း တဖက်တချက် မှာ အပေါက်ပြီး လက်ကိုင်ရိုးကို တတ်ထားပါ တယ်။ အခွံမပါ၊အမွှေးမပါ ခွဲထားပြီး၊အသား၊အဆန်ထုတ်ထားပြီး၊လွှင့်ပစ်ထားသောအုန်းမှုတ်ခွက် အခွံကိုဆိုလိုပါသည်။ “ဆေးနည်းတစ်မျိုးကတော့” အုန်းမှုတ်ခွက်တစ်ခုကို ရေဆေး နေလှမ်းပြီး ပါက မီးရှို့ပါ။ထွက်လာသောအငွေ့ကို … Read more
ယနေ့ မွနျမာနိုငျငံကွီး နဲ့ တိုကျရိုကျပတျသကျပွီး အရေးကွီးသော အနာဂါတျ ရှဖွေ့ဈ ဟောကိနျးကွီးမြား
မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာလာမေး ကြတယ် ကျွန်တော် ကလည်း ဟောကိန်းတွေ ဟောချက်တွေ ဘာမှမပြောချင်တာနဲ့ ငြိမ်နေခဲ့တာပါ… ဒါပေမယ့် ယုံကြည်သူများက သိချင်တယ် တစ်ကဲကဲ မို့ ဟောကိန်းအချို့ ထုတ်ပြပါရစေ …. ၁. ကိုဗစ်ရောဂါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနည်းဆုံး လူတစ်သောင်း ဝန်းကျင်လောက် ကူးစက်သွားပါလိမ့်အုန်းမည်။ ၂. ပိတ်ပင်ထားသော မြို့များတွင်လည်း ထပ်မံတွေ့ ရှိရတတ်ပြီး စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်တတ်ပါလိမ့်မည်။ ၃. ပွဲလမ်းသဘင်များ အားလုံးပိတ်ပင်ခံရပြီး ကိုဗစ်ရောဂါအပြင် အခြား စိတ်ရောဂါများကြောင့် ၂၀၂၁ အတွင်း စိတ်ကျသူများ ၊ သတ်သေသူများ ၊ အကြွေးမြီးများဖြင့် ဒုက္ခရောက်သူများ ပေါများလာတတ်သည်။ ၄. ကိုဗစ်အခြေအနေသည် ၁၁ လပိုင်း နှင့် ၁၂ ပိုင်း ဝန်းကျင်မှာ အားနည်းသွားဖွယ်ရာရှိပြီး … Read more
ကောင်းကင်မှာ တိမ်တွေမဲလာပြီဆိုရင် ဒါဟာ မိုးရွာတော့မယ်လို့ နမိတ်ပြသလိုမျိုး၊ လူတွေမှာလည်း လူရဲ့ကိုယ်ပေါ်ရှိ လက္ခဏာရပ်တွေက ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ကြိုတင်နမိတ်ပြတာမျိုးရှိပါတယ်တဲ့။ ဒါက အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လေ့လာဖော်ပြထားကြတဲ့ လက္ခဏာရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဖော်ပြချက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အတိအကျဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မဆိုလိုထားပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတာမို့ လက္ခဏာပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ရည်ရွယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်ကို ရှေ့တည့်တည့်မှာ ထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်မှာ လမ်းကြောင်းလေးတွေ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တချို့လမ်းကြောင်းလေးတွေ ဆို လက်ကောက်ဝတ်ထားသလို လက်ကို ပတ်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။ ဒါတွေဟာ သင့်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်လမ်းကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းဟာ လူ့သက်တမ်း အနှစ် ၃၀ ကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လူအများစုမှာ ၂ ကြောင်းနဲ့ ၃ ကြောင်းကြားရှိကြပြီး တချို့ဆို ၄ ကြောင်းအထိ ရှိကြပါတယ်။ ဒီလို လက်ကောက်ဝတ်လမ်းကြောင်း၎ ကြောင်းအထိရှိတဲ့လက္ခဏာရပ်မျိုးဟာ လူ့သက်တမ်း ၉၀ ကျော်အထိ ရှင်သန်ရမယ့် … Read more
အရေပြား ဝေဒနာ၊ အနာ၊ ပိုးမွှား အကိုက်ခံရခြင်းတို့ အတွက်…
ရှေးကတည်းက ငှက်ပျောရွက်လေးကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အစားအစာေ တွကို ထုပ်စားတဲ့ အကျင့်ရှိခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို ငှက်ပျောရွက်နဲ့ ထုပ်ထားတဲ့ အစာကစားပြီး အမှိုက်ပုံးထဲ လွှင့်ပစ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ပလပ်စတစ်လိုမျိုး သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း မထိခိုက်စေပါဘူး။ ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှု များပြားတဲ့ ငှက်ပျောသီးရဲ့ ကောင်းကျိုးကိုလည်း သင်သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ငှက်ပျောရွက်ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကို မျှဝေပေးသွားပါမယ်။ ဗိုက်အောင့်ခြင်းအတွက် ငှက်ပျောရွက်နုနုကို ယူပြီး ရေဆေးကာ ဗိုက်ပေါ်ကပ်ထားပေးပါ။ ငှက်ပျောသီးကသာ သင့်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေတာ မဟုတ်ဘဲ ငှက်ပျောရွက်က လည်း သင့်ခန္ဓာကိုယ် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေ သက်သာစေပါတယ်။ အရေပြားဝေဒနာများအတွက် အရေပြားယားယံတာ၊ ဗောက်ထလို့ ဦးရေပြားမှာ အဖက်အဖက်တွေ လန်နေတာ၊ နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် နာကျင်နေတာတို့ဖြစ်ရင် ငှက်ပျောရွက်က အကောင်းဆုံး ကုသမှုပါပဲ။ ငှက်ပျောရွက်ကို မွှေစက်ထဲထည့်မွှေပြီး နေလောင်တဲ့ အရေပြား၊ … Read more
စီးပှား ဥစ်စာ ဓန ကွှယျဝ စရေနျ မဟာလာဘံ လာဘျဖှငျ့ ကနျတော့ပှဲ ထိုးနညျး
စီးပွားဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝစေရန် မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့် ကန်တော့ပွဲထိုးနည်း မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့် ကန်တော့ပွဲထိုးနည်း မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့် ကန်တော့ပွဲထိုးရာ၌ အောက်ဖော်ပြပါ ကန်တော့ပွဲသုံး ပစ္စည်းများအား အသုံးပြုရမည်… (၁) အုန်းသီးတစ်လုံး (၂) ငှက်ပျောသီး(၃)ဖီး (၃) ကွမ်း ၊ ကွမ်းသီး ၊ ထုံး ၊ ဆေး (၄) သပြေပန်း (၅) ထီး ၊ တံခွန် ၊ ကုက္ကား ၊ မုလေးပွား ၊ ယပ် ၊ ကြက်လျှာအစုံ (၆) ဆီမီး(၁)တိုင် (၇) ရေတစ်ခွက် (၈) ခံတောင်း(သို့)ဇလုံတစ်ခု (၉) အခြားလှူဒါန်းဖွယ်ရာ ပစ္စည်းများ စသည်တို့ဖြစ်သည် မိမိနေအိမ်ရှိ ဘုရားခန်း၌ ပြုလုပ်နိုင်သည် … Read more